नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, १ असार २०७६) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, १ असार २०७६)
on: June 16, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी
बजार सारांश (जेठ ३०, २०७६)
गत साता नेप्से परिसूचक १५ दशमलव शून्य ४ अंक (१.१७ प्रतिशत) घटेर १२६९ दशमलव ५५ मा बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ५० र २०० दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा मााथि चलिरहेको छ । गत साता नेप्से ५० दिनको मुभिङ एभरेजमा टेवा लिएर सोभन्दा माथि चलिरहेको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. ६८ दशमलव ९० करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम घटेर रू. ५१ दशमलव २६ करोड पुगेको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ११०२ देखि १३४९ को स्विङको २३ दशमलव ६ प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको टेवालाई ब्रेक गरेर सोभन्दा तल चलिरहेको छ ।
गत साताको नेप्से परिसूचकले बियरिश मोमेन्टम देखाएको छ । साप्ताहिक औसत कारोबार रकममा आएको कमीले बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता घटिरहेको संकेत गरेको छ । हालको अवस्थामा नजीकको टेवा अंक तथा प्रतिरोध अंक क्रमशः १२३० तथा १२९० छ ।
एमएसीडीमा एमएसीडीमा दुईओटा रेखा हुन्छन्, जसमा एउटा रेखाले बजारको दिशा परिवर्तनको संकेत गर्छ भने अर्कोे रेखाले बजारको प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) देखाउने गर्छ । यदि एमएसीडी रेखाले सिग्लन रेखालाई तलबाट माथि काटेमा यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइन्छ । यसले शेयरहरू किन्ने संकेत गर्दछ भने एमएसीडी रेखाले सिग्लन रेखालाई माथिबाट तल काटेमा यसलाई नकारात्मक संकेतका रूपमा लिइन्छ र यसले शेयरहरू बेच्ने संकेत गर्दछ ।
गएको साताको शुरूमा एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइन क्रमशः ८ दशमलव ४४ र १५ दशमलव ४४ विन्दुमा रहेको थियो । साताको अन्त्यसम्म एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइन ८ दशमलव ४९ र ७ दशमलव ७७ विन्दु घटेर क्रमशः –० दशमलव शून्य ६ र ७ दशमलव ६६ विन्दुमा रहन पुग्यो । गत साता एमएसीडी लाइन नेगेटिभ जोनमा प्रवेश गरेको हुनाले बियरिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ । तर सिग्नल लाइन भने पोजिटिभ जोनमै चलिरहेको छ । एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइनबीचको दूरी बढिरहेकाले बजारमा बियरिश मोमेन्टम हावी रहेको संकेत गरेको छ ।
प्राविधिक प्राविधिक विश्लेषणको यस्तो सूचक हो, जसलाई साइडवेज रूपमा चलिरहेको बजारमा शेयर किनबेच गर्न बढी उपयोगी मानिन्छ । त्यसैगरी यसले बजारमा खरीद र विक्रीको स्पष्ट संकेत देखाउने गर्दछ ।
गएको साताको शुरूमा आरएसआई ४६ दशमलव ५५ अंकमा थियो । गएको साता आरएसआई ६ दशमलव ६८ अंक घटेर ३९ दशमलव ८७ अंकमा बन्द भएको छ । गएको साता आरएसआई ४० को लाइनलाई ब्रेक गरेर तल आएकाले बियरिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ ।
बोलिंगर ब्यान्ड एक प्राविधिक विश्लेषण सूचक हो, जसमा २० दिने मुभिङ एभरेजका साथ दुई ब्यान्ड (एउटा माथि र एउटा तल) हुन्छन् । यी ब्यान्डहरूले बजारको अस्थिरताको मात्रा संकेत गर्दछन्, जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन गणना गरेर पत्ता लगाइन्छ ।
गएको साताको अधिकतम दिन नेप्से परिसूचक तल्लो ब्यान्डतिर चलिरहेको हुनाले बियरिश एक्सप्यान्सनको संकेत गरेको छ । साथै माथिल्लो तथा तल्लो ब्यान्डबीचकोे दूरी बढिरहेकाले गर्दा बजारमा अस्थिरता बढ्न थालेको संकेत गरेको छ ।
अन ब्यालेन्स भोल्युम एक मोमेन्टम सूचक हो, जसले बजारको भोल्युमलाई प्रयोग गरेर मूल्य आकलन गर्न मद्दत गर्दछ । अन ब्यालेन्स भोल्युमको मात्रा बजार बढेको दिनको भोल्युमलाई जोडेर र बजार घटेको दिनको भोल्युमलाई घटाएर निकालिन्छ ।
गएको साताको शुरूमा ओबीभी –५ दशमलव ७ अर्बमा रहेको थियो । साताको अन्त्यसम्म ओबीभी १ अर्ब घटेर –६ दशमलव ७ अर्बमा बन्द भयो । गत साता ओबीभी १ अर्ब घटेकाले बजारमा विक्रीको चाप बढेको संकेत गरेको छ ।
गत साता नेप्से परिसूचक १५ दशमलव शून्य ४ अंक (१ दशमलव १७ प्रतिशत) घटेर १२६९ दशमलव ५५ मा बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ५० र २०० दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा मााथि चलिरहेको छ । गत साता नेप्सेले ५० दिनको मुभिङ एभरेजमा टेवा लिएर सोभन्दा माथि चलिरहेको छ । एमएसीडी लाइन नेगेटिभ जोनमा प्रवेश गरेकाले बियरिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ ।
आरएसआई ४० को लाइनलाई ब्रेक गरेर तल आएकाले बियरिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ । गत साता ओबीभी १ अर्ब घटेकाले बजारमा विक्रीको चाप बढेको संकेत गरेको छ । बोलिंगर ब्यान्डले बियरिश एक्सप्यान्सनको संकेत गर्नुका साथै बजारमा अस्थिरता बढ्न थालेको संकेत गरेको छ । हालको अवस्थामा नजीकको टेवा अंक तथा प्रतिरोध अंक क्रमशः १२३० तथा १२९० छ ।
नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, २९ असार २०७६)
नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, १५ असार २०७६)